#Rubin “Si Qaldan Ayey Soomaaliya ugu Ciyaareysaa gacmaheeda khilaafka Badda ee Kenya” - Get Latest News From Horn of Africa
#Rubin “Si Qaldan Ayey Soomaaliya ugu Ciyaareysaa gacmaheeda khilaafka Badda ee Kenya”
Hay’ad dalka Maraykanka ka dhisan kana mid ah kuwa saameynta ku leh Maamulka Madaxweynaha Maraykanka Trump ayaa la safatay dowlada Kenya gaar ahaan khilaafka ka jira labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya ee lahaanshaha dhul badeed.
The American Enterprise Institute (AEI) ayaa sheegtay in dowlada Soomaaliya ay si qaldan gacmaheeda ugu ciyaareyso kadib markii ay go’aansatay in ay xaraashto baloogyo ku yaal badweynta Hindiya oo ay sidoo kale sheeganayso dowlada Kenya.Sarkaal ka tirsan hay’ada AEI Michael Rubin ayaa sheegay in go’aanka Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ay sii dhaawacayso ganacsiga ka jira dalka Soomaaliya.
“Talaabada Dowlada Soomaaliya ma ahan mid macne sameyneysa iyadoo ku tiirsan AMISOM iyo dowlada Kenya oo ka mid ah AMISOM dhowrista amniga.”ayuu sii raciyay Rubin.
Sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in dowlada Soomaaliya ay tahay inay ogaato masiibooyin tobanaan sano ka jirey in qaninimo waqti gaaban ay u keeni karto qiime aad u sareeya oo aysan awoodin inay u dulqaadato.
“Farmaajo waxa laga yaabaa inuu isleeyahay shidaalka ku badbaadi dhaqaalaha Soomaaliya oo liita balse soo saarista shidaalka oo uusan awood u lahayn xaalada ayay ugaga sii dari kartaa.”ayuu sii raaciyay mas’uulkan ka tirsan AEI.
Sida lagu daabacay wargeyska Daily Nation mas’uulkan ka tirsan hay’ada AEI ayaa aaminsan in haddii maxkmada caalamiga ah ee ICJ u xukumiso dalka Soomaaliya dhulbadeedka la isku haysto inaysan awoodin dowlada Soomaaliya inay difaacato.
Dowlada Kenya ayaa u muuqata inay albaab cusub u fureysa sheegashada dhul badeedka dacwadiisu ay taal maxkamada caalamiga ah ee ICJ iyadoo wax walba u sameyneysa sidii ay ugaga guuleysan lahayd dowlada Soomaaliya oo rajo boqolkii 99 ah ka qabta in loo xukmiyo dhul badeedka lagu muransan yahay.